घुस लिएर विद्यार्थी पास गराउने शिक्षक अख्तियारको फन्दामा - Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता	 २०७५ फाल्गुन २७ १०:०५ 2
काठमाडौं । विद्यार्थीसँग घुस लिने भ्याली कलेज अफ टेक्निकल साइन्सका शिक्षक खेमराज शाही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् । उनले पास गराइदिने प्रलोभनमा प्रतिविद्यार्थी २५ हजार घुस लिने गरेको रहस्य खुलेपछि अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरेको खबर सार्वजनिक भएको हो।
शाहीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत पब्लिक हेल्थ संकायको चौथो सेमेस्टरको परीक्षामा सामेल बायोस्टाटिस्टिक्स विषयका परीक्षार्थीलाई उर्तिण गराइदिने भनेर त्यसरी घुस खाने गरेको पाइएको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुबाट पाएको सूचनाको आधारमा अख्तियारले छानवीन गर्दा शाहिले साथी अर्जुन भाट र होप इन्टरनेशनल कलेजमा अध्ययनरत प्रवेग कोरासँगको मिलोमतोमा यस्तो कार्य गर्ने गरेको खुलेको हो ।
शाहीले फेल भएका परीक्षार्थीसँग समेत रकम उठाउने गरेको पाइएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार शाहीले यसका लागि परीक्षार्थीहरूसँग सम्पर्क गर्न साथी अर्जुन भाटलाई लगाएका थिए । केही परीक्षार्थीसँग तत्काल र केहीसँग पछि पैसा लिने शर्तमा ६ जना अनुर्तीणको उत्तरपुस्तिकामा अर्जुन भाट र प्रवेगलाई लेख्न लगाएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस् : मेलम्चीमा अर्को ठेक्का, थप दुई अर्ब ५२ करोड भार
दिमाग तेजिलो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अप्नाउनुहोस्
नेकपाका नेताले युवतीको हत्या गरी शव सप्तकोसीमा फाले !
पोखराको भण्डारढिकमा निशूल्क व्यायमशाला सुरु